Oppo Reno 4 na Reno 4 Pro, kpughere ha oru nkọwa | Gam akporosis
Onye mere ekwentị Oppo ga-emelite usoro Reno ya “oge adịghị anya” jiri opekata mpe ngwaọrụ abụọ. A ga-akpọ ndị a Reno 4 na Reno 4 Pro, na nke a ndị nọchiri Oppo Reno 3 na Oppo Reno 3 Pro ọnụ, smartphones ndị nwere ezigbo ahịa kemgbe ha malitere na ahịa.
Modelsdị abụọ ahụ agafewo TENAA, nke na-enye ohere ịmara ihe niile n'ụzọ zuru ezu ma nwee etu ọnụ ọkọlọtọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ 2020 a. Ngosipụta nke abụọ ga-abụ nke June 5 a ma atụ anya ihe dị ukwuu n'aka ha, ebe ọ bụ na China ha jisiri ike merie ahịa nke asọmpi kachasị asọmpi ha.
1 Reno 4 na Reno 4 Pro nkọwa
2 Nnweta na ọnụahịa nwere ike
Reno 4 na Reno 4 Pro nkọwa
na Oppo Reno 4 na Oppo Reno 4 Pro Ha ga - enyo enyo nke nwere okpukpu abụọ, nke mbụ ga - abụ 6,43 sentimita na nke abụọ 6,55 sentimita asatọ na ọnụego ume ọhụrụ nke 60 na 90 Hz. Ogwe abụọ ahụ ga-abụ Full HD + na mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ na Reno 4 ihe ngosi ahụ bụ iko 2.5D.
Abụọ nzọ na Snapdragon 765G chipset nke ahụ ga-enye njikọta 5G, batrị 4.000 mAh na ụgwọ 65W ngwa ngwa, 8/128 GB nke nchekwa na ha abụọ, mana Pro ga-enwekwa nhazi ọzọ 12/256 GB. Nkọwa dị ka akara mkpịsị aka, nke nwere ike ịbịa n'okpuru ihuenyo, ka ga-ama.
El Oppo Reno 4 ga-enwe ihu igwe ihu abụọ, isi 32 MP na-akwado ya na ihe mmetụta 2 MP, Oppo Reno 4 Pro ga-efe naanị otu 32 MP. Abụọ na azụ na-arịgo oghere 48 MP na ọdịiche nke OIS na Pro, Reno 4 Pro ga-abịa na elekere anya 12 na 13 MP, ebe Reno 4 ga-enwe modulu abụọ nke 8 na 2 MP.
Nnweta na ọnụahịa nwere ike
Oppo ga-ewetara Reno 4 ọhụụ yana Reno 4 Pro n’ime ụbọchị ole na ole, kpọmkwem na June 5. Ọnụahịa ahụ ga-amalite n'ihe ruru 3.000 yuan, ihe ruru ihe dị ka euro 377 iji gbanwee maka ụdị izizi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Oppo Reno 4 na Reno 4 Pro, kpughere nkọwapụta ọrụ ha
Nke a bụ akwụkwọ ahụaja ike nke igbochi gị Samsung ekwentị?